Xiddigii xulka qaranka Talyaaniga ee u horseeday guusha koobka adduunka 1982 oo geeriyooday… – Hagaag.com
Xiddigii xulka qaranka Talyaaniga ee u horseeday guusha koobka adduunka 1982 oo geeriyooday…
Posted on 10 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Talyaanigu waxay ugu yeeraan “Pableto”, Brazilna waxay u garanayaan inuu yahay karbaashe ama garaace kaasi waa Paolo Rossi, weeraryahankii hore ee Talyaaniga, oo Khamiistii ku dhintay da’da 64.
Waddankiisa waxaa loo arkaa inuu yahay halyey u horseeday koox horay kalsoonida uga dhuntay ayuu ku hogaamiyey koobkii adduunka ee 1982.
Reer Brazil ayaa sidoo kale xusuustaan, maxaa yeelay isagu wuxuu sabab u ahaa guuldarro loo yaqaanay musiibadii Sarria, taas oo dad badani ay u arkaan inay bedeshay kubbadda cagta dalka ilaa abid.
Rossi wuxuu ahaa xiddigii ugu weynaa ee mid ka mid ah ciyaarihii ugu fiicnaa ee Koobka Adduunka abid: Talyaanigu wuxuu 3-2 kaga badiyay Brazil kulankii wareega labaad ee ka dhacay Sarria Stadium.
Adduunka ayaa u riyaaqay Brazil, maadaama ay u ciyaartay si cajaa’ib leh oo weerar ah, waxayna ku guuleysatay afarteedii kulan ee ugu horeysay wadar ahaan 13 gool, marka loo eego kaliya 3 gool oo ku dhacay shabaqeeda.
Kooxdan oo uu tababare u ahaa Tele Santana, ayay dad badani u arkeen inay yihiin kuwii ugu fiicnaa abid taariikhda waddanka.
Italy ayaa ka gudubtay wareega koowaad ee group-ka, iyagoo barbaro la gashay xulalka Peru, Poland iyo Cameroon, ka hor inta aysan si lama filaan ah 2-1 uga badinin Argentina.
Rossi – oo umuuqday mid daciif ah jir ahaan ayaa kasoo laabtay ganaax labo sano ah, sababo la xiriira fadeexadii wax isdaba marinta natiijooyinka kulamada, waxaana uu soo bandhigay qaab ciyaareed liita ilaa waqtigaasi.
Brazil ayaa u baahneyd barbaro si ay u gaarto semi-finalka wareega labaad ee group-yada, laakiin dib ayey uga dhacday 5 daqiiqo sababtoo ah difaaca oo xumaa ayaa u ogolaatay Rossi oo aan la ilaalineynin inuu shabaqa ku taabto kubad uu karoos ka soo qaaday Antonio Cabrini.
Kooxda ka socotay Koofurta Amerika ayaa 7 daqiiqo kadib barbareysay, gool uu ku tilmaamay wariye ka tirsanaa BBC-da John Motson ku yiri si kooban”waxay astaan ​​u tahay falsafadda kubbadda cagta Brazil.”
Goolkan ayaa loo malaynayay inuu hordhac u yahay guul raaxo leh oo ay gaadho Brazil, laakiin 25 daqiiqo kadib ayuu Rossi dhexda ka qabtay darbo uu tuuray Toninho Cerezo, isagoo la ordaya kubada si sax ahna shabaqa ugu hubsaday taasi oo mar kale hogaanka u dhiibtay Italy.
Falcao ayaa u barbareeyay xulka Brazil qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin Rossi ayaa mar kale shabaqa soo taabtay, isagoo fursad u helay ilaalo la’ aanta kooxda Brazil.
Dad badan oo reer Brazil ah ayaa dood ka keenay guuldarada maadaama ay sababtay isbadal qoto dheer oo waara oo ku dhaca qaab ciyaareedkooda, iyagoo u batay qaab difaac badan oo saameeyey qaab ciyaareedka Yurub.
Wareysi wadajir ah oo lala yeeshay Zico laba sano ka hor, ayaa Rossi wuxuu ku sheegay booqashadiisii ​​ugu horreysay ee uu ku tago dalka Brazil sanadkii 1989, uu taksiile ku amray inuu ka dego gaariga markii uu gartay inuu yahay Rossi, laakiin taasi waxay aheyd wax aan caadi aheyn.
“Dhab ahaantii waxaan leeyahay saaxiibo badan oo reer Brazil ah, waxaana jira kalgacal iyo ixtiraam badan oo naga dhexeeya. Kaliya iima arkaan aniga inaan ahay ciyaaryahan seddex gool dhaliyay hal jeer kulankii Brazil. Wax intaas ka badan ayaa jira,” ayuu raaciyay.
“Waxa iga dhigaya inaan ku faanayo waa inaanan kaliya ka guuleysan Brazil, laakiin aan garaacnay xulka Brazil 1982, maxaa yeelay waa koox gaar ah oo ay ku jiraan xiddigo cajiib ah,” ayuu yiri.
Weedha ah “Waad ka ilmaysiisay Brazil” waxaa lala xiriiriyay Rossi, oo isagu horey uga oohiyay reer Brazil habeenkii xanuunka badnaa ee ay ka baxeen Koobkii Adduunka ee 1982-kii, ee ku guuleystay Talyaanigu sababo la xiriira goolasha Rossi iyo xirfadiisa sare.
Ciyaartii kama dambeysta ayaa isku soo haray xulalka Talyaaniga iyo Jarmalka Galbeed oo lagu ciyaaray garoonka Real Madrid ee Santiago bernabeu, waxayna uga badiyeen 3-1, siddasina kula hoyday koobka adduunka.